Xirfadaha Tareenka | RayHaber | raillynews
Sarkaalka Dhaqdhaqaaqa (Heerka 4) Heerka Shaqada ee 5544 ee Sharciga Xirfadaha Xirfadaha (VQA) iyo Nidaamka Diyaarinta Istaandarada Shaqada Qaranka "iyo Xeerka Xeerka ee dejinta, Meelalaha, Habraacyada Shaqada iyo Mabaadiida Guddiyada Siyaasadda" Horumarinta TCDD iyo Shaqaalaha Taageerada TCDD ee Ururka Shaqsiga iyo Nidaamka Kalsoonida ee VQA.
Sarkaalka Dhaqdhaqaaqa (Heerka 4) heerarka xirfadeed ee qaranka waxaa lagu qiimeeyay fikradaha hay'adaha iyo ururrada ku habboon ee qaybta iyo ansixiyay Guddiga Maamulka VQA ka dib markii baaritaan ay sameeyeen Guddiga Waaxda Gaadiidka, Sahayda iyo Isgaarsiinta.
Sarkaalka Dhaqdhaqaaqa (Heerka 4) waa qofka u shaqeeya adeegga gaadiidka sida waafaqsan sharciga, wuxuu diyaariyaa tababbar, diyaarinta iyo qaabsocodyada aqbalaadda, wuxuu diyaariyaa qorshe hawleed iyo inuu hubiyo in hawlahaas lagu fuliyo si waafaqsan qorshahan.
Sarkaalka Dhaqdhaqaaqa wuxuu mas'uul ka yahay saxnaanta, waqtiga iyo tayada waxqabadyada aan la socon kormeerka. Waxay u shaqeysaa si waafaqsan tilmaamaha shaqada ee fulinta macaamilada, waxay gacan ka geysaneysaa xallinta dhibaatada iyada oo la adeegsanayo is-maamulka oo si toos ah uga masuul ah aagga masuuliyadda marka ay la kulmaan xaalado aan caadi ahayn, oo ay ku wargeliyaan dhinacyada ku haboon ee ku saabsan xaaladaha aan caadiga ahayn ee ka baxsan xadka mas'uuliyadda. Waa mas'uuliyadda sarkaalka dhaqaaqa si loo xaqiijiyo amniga asxaabtiisa ama asxaabtiisa.
Saraakiisha Hawlaha waxay ka shaqeeyaan goobo shaqo oo leh xoojin kala duwan iyo tas-hiilaad bulsheed oo kala duwan. Waxaa ka mid ah xaaladaha aan fiicneyn ee jawiga shaqada, walbahaarka ee saraakiisha dhaqdhaqaaqa ee ka shaqeeya goobo waaweyn oo xoog leh, iyo dareenka kali ah ee sarkaalka dhaqdhaqaaqa ee ka shaqeynaya meelaha u baahan baahi iyo guud ahaan kaligaa shaqeeya. Waa suurtagal in la shaqeeyo wakhti kasta oo maalinta ah iyo fasaxyada dadweynaha, dhammaan noocyada cimilada, jawi gudaha iyo dibadda ah.
Cudurka rheumatic, hurdo la'aan iyo daal iyo sababo ay ka dhalanayaan jawiga shaqada iyo xaaladaha waa khasaarihii ay dadku qabteen xirfaddan.
Waa mid ka mid ah musharaxiinta muhiimka ah ee jagooyinka ugu sarreeya ee unugyada tareennada iyo shaqaalaha maamulka iyadoo sarkaalku uu go'aan ka gaari karo kaligiis inta uu shaqeynayo iyo inuu door firfircoon ka qaato maamulka goobta iyo gaadiidka. Iyada oo ay sabab u tahay dabeecadda xirfadeed, waxay leedahay fursad ay ku shaqeyso meel kasta oo ay jirto jidka tareenka.
2.6. Shuruudaha Xirfadleyda kale
Sarkaalka Dhaqdhaqaaqa waa inuu ku jiraa nadiif, nadiif, dhar, iyo awooda wakiilnimo iyo isgaarsiin wax ku ool ah, iyada oo la raacayo xiriirka joogtada ah ee macaamiisha iyo dadweynaha.
Qiyaasta iyo qiimeynta loo fulin lahaa ujeedooyinka shahaadada si waafaqsan shahaadooyinka qaran ee ku salaysan heerka aqooneed ee Sarkaalka Dhaqdhaqaaqa (Heerka 4) waa in lagu sameeyaa qoraal iyo / ama hadal afka ah oo la taaban karo oo ku yaal xarumaha cabbirka iyo qiimeynta ee xaaladaha shaqada ee lagama maarmaanka ah la bixiyo.
Habka cabbirka iyo qiimeynta iyo mabaadi'da codsiga ayaa faahfaahin ku ah shahaadooyinka qaranka si loo diyaariyo iyada oo loo eegayo heerkan xirfadeed. Nidaamyada la xidhiidha cabbiraadda iyo qiimeynta iyo shahaadada waxaa lagu fuliyaa qaabka Nidaamka Takhasuska Xirfadaha, Imtixaanka iyo Shahaadada.
Sarkaalka Guud ee Macluumaadka Guud
Xirfadaha Tareenka (Kormeeraha)
Xirfadaha Tareenka (Hay'ad Tababar)
Xirfadaha Tareenka (Tareenka Tareenka iyo Dayactiraha)
TCDD 3 Agaasimaha Gobolka Koçbay, Xirfadaha Tareenka ayaa helay aqoonsi heer caalami ah
TCDD, saldhigyada xiran si ay u dhex maraan sarkaalka hay'adda. ka dhigan doonaa
Guddiga Waaxda Isgaadhsiinta
heerarka xirfadeed ee qaranka
20 million oo bam ah oo bareeg ah oo ku wajahan Bursa!
Shaqada cusbooneysiinta ayaa ka socota qaybta mile ee 8 ee Goran-Mingechevir